သတင်း - နေကြာပန်းများ စိုက်ပျိုးခြင်း၏ အဓိကအချက်များအကြောင်း သင်ဘာသိလဲ။
နေကြာပန်းများ စိုက်ပျိုးခြင်း၏ အဓိကအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဘာသိထားသနည်း။
နေကြာသည် Asteraceae မျိုးရင်းတွင် နေကြာမျိုးရင်းဖြစ်ပြီး နေကြာပန်း၊ နေကြာ၊ နေကြာ၊ နေကြာ၊ နေကြာ။နေကြာစေ့ကို လူအများစုက စားဖူးကြတယ်၊ နေကြာစိုက်ပျိုးတဲ့ အဓိကအချက်တွေကို သင်ဘယ်လောက်သိလဲ။လာမည့် နေကြာစေ့ ပေးသွင်းသူသည် နေကြာ စိုက်ပျိုးခြင်း၏ အဓိက အချက်များကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
နေကြာပန်းများသည် 1510 ခုနှစ်တွင် စပိန်လူမျိုးများမှ မြောက်အမေရိကမှ ဥရောပသို့ အိမ်မွေးဇာတိဖြစ်ပြီး အစပိုင်းတွင် တန်ဆာဆင်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။၁၉ ရာစုတွင် ရုရှားမှ မြောက်အမေရိကသို့ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။၎င်းတို့ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။နေကြာစေ့ကို နေကြာစေ့ဟု ခေါ်တွင်ပြီး မကြာခဏ ကြော်ကာ သရေစာအဖြစ် စားသုံးရသည်မှာ အရသာရှိသည်။
1. နေကြာပန်းများသည် မည်သည့်မြေမျိုးတွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိသနည်း။
နေရာများစွာတွင် နေကြာကို ဆားငန်၊ သဲနှင့် ခြောက်သွေ့သောမြေများတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး အဓိကအားဖြင့် ၎င်းသည် အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အခြားသီးနှံများထက် ကုန်ကျစရိတ်ပိုသက်သာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။နေကြာသည် တင်းကျပ်သောမြေဆီလွှာလိုအပ်ချက်မရှိသော်လည်း မြေသြဇာကောင်းသောမြေမှ ခြောက်သွေ့သော၊ မျိုးမအောင်သော နှင့် ဆားငန်မြေအထိ မြေအမျိုးအစားအားလုံးတွင် ပေါက်နိုင်သည်။သို့ရာတွင် နက်ရှိုင်းသောအလွှာ၊ မြေဆွေးပါဝင်မှုမြင့်မားသော၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကောင်းမွန်ပြီး ရေနှင့်မြေသြဇာထိန်းထားနိုင်မှုကောင်းမွန်သော လယ်ကွင်းများတွင် စိုက်ပျိုးသည့်အခါ အထွက်နှုန်းတိုးရန် အလားအလာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော အထွက်နှုန်းနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. နေကြာစေ့၏ အကျုံးဝင်မှုသည် အဘယ်နည်း။
ဆီနေကြာစေ့များတွင် ရိတ်သိမ်းပြီးသည့်နောက် ရက်ပေါင်း 20 မှ 50 အတွင်း ခေတ္တအနားယူလေ့ရှိသည်။အစေ့များကို ပုံမှန်မျိုးစေ့ချသည့်ရာသီအထိ 'အိပ်စက်ခြင်း' ထားနိုင်သောကြောင့် ဇီဝဗေဒအရ အကျုံးဝင်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသော ရာသီဥတုမျိုးတွင်ပင် မျိုးစေ့များ ရင့်ကျက်သော ရိတ်သိမ်းရာသီတွင် အစေ့အနှံပေါက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။လက်ရှိနှစ်၏ရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် လာမည့်မျိုးစေ့ကြဲရာသီအပြီးတွင် ဤအမြုံသည် သဘာဝအတိုင်း ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။မျိုးစေ့များကို မျိုးစေ့ကြဲခြင်း သို့မဟုတ် သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ထူးခြားသည့်အခြေအနေများတွင်၊ အမြုံကို ကိုယ်တိုင်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အစေ့များကို အီသီလင်းဂလိုင်ကော 50 မှ 100 မိုက်ခရိုဂရမ်/မီလီလီတာတွင် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီကြာ စိမ်ထားပြီး သင့်လျော်သောအခြေအနေအောက်တွင် အစေ့အဆံများပေါက်သည်။Gibberellin သည် ဆီထွက်သော နေကြာစေ့များတွင် ခေတ္တအနားယူခြင်းကို ချိုးဖျက်ရန်အတွက်လည်း အသုံးဝင်သည်။
၃။ နေကြာစိုက်ပျိုးရန်အတွက် မည်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် သင့်လျော်သနည်း။
နေကြာသည် အပူချိန်ကို နှစ်သက်သော သီးနှံဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အအေးဒဏ်ခံနိုင်သော သီးနှံဖြစ်သည်။မြေအလွှာရှိ မြေအပူချိန် (၀-၂၀ စင်တီမီတာ) သည် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ အစေ့များ အညှောက်ပေါက်လာကာ အပူချိန် ၄-၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ပေါက်နိုင်ပြီး ပျိုးပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အပူချိန် ၈-၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ထို့အပြင် ပျိုးပင်ပေါက်ထွက်မှုသည် မျိုးစေ့အရည်အသွေး၊ အစိုဓာတ်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် မြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတို့နှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။
ပျိုးပင်မှ ယေဘုယျဆီနေကြာ ≥5℃ ထိရောက်သော အပူချိန် 1700 ℃ လိုအပ်သည်။ပျိုးပင်မှ ရင့်ကျက်သည်အထိ စားသုံးနိုင်သော နေကြာသည် ≥5℃ ထိရောက်သော အပူချိန် 1900 ℃ ခန့် လိုအပ်သည်။